Financial Assistance in Burmese | Continence Foundation of Australia
Financial Assistance in Burmese
For some people, it is necessary to use
continence products such as pads, pants,
catheters, urine drainage bags or bedding
protection products to manage their
condition. For some people, the continence
products may be needed long term.
Consequently, the cost of these products
becomes very expensive, putting
unreasonable pressure on the household
တချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခAနေကို ထိန်းဖို့ ဂွမ်းဖတ်တွေ၊ ဘောင်းဘီတွေ၊ ဆီးပိုက်တွေ၊ ဆီးဖယ်ထုတ် စီးဆင်းစေတဲ့Aိတ်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် Aိပ်ရာကို မညစ်ပေဖိှု့ကာကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဖို့လိုပါတယ်။ တချို့လူတွေAတွက်မှာတော့ ဆီးဝမ်းထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ AသုံးAဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ရေရှည် Aသုံးပြုဖို့ လိုAပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီပစ္စည်းတွေAတွက် ကုန်ကျငွေက သိတ်ဈေးများလာပြီး သူတို့Aပေါ်မှာ Aိမ်သုံးစရိတ် မလုံလောက်နိုင်တဲ့ဒဏ် ပိလာပါတယ်။
A continence clinic or the National
Continence Helpline can provide you with
contact details for suppliers of continence
products. They can also provide you with
information about your eligibility for funding
schemes, which may assist with the ongoing
costs of purchasing and replacing continence
ဆီးဝမ်းထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ဆေးရုံဆေးခန်း ဒါမှမဟုတ် တစ်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ဆီး၊ဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ ကူညီရေး ဖုန်းလိုင်း က သင့်ကို ဆီးဝမ်းထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ AသုံးAဆောင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချပေးသူတွေရဲ့
ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လိပ်စာကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်ကို ဆီးဝမ်းထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ AသုံးAဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့နြဲ့
ဖည့်တင်းဖို့ ကုန်ကျငွေတေAွ တွက် Aဆက်မပြတ် AကူAညီ ပေးနိုင်ပါတယ်။
Note: An assessment byacontinence nurse
advisor is recommended to ensure that you
or the person you are caring for uses the
most appropriate continence product,
including the correct fit and application of the
သတိပြုရန်။ သင် ဒါမှမဟုတ် သင် ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူတို့ဟာ AသုံးAဆောင်ပစ္စည်းရဲ့ မှန်ကန်တဲ့Aရွယ်Aစားနဲ့Aသုံးပြုခြင်းတို့AပါAဝင် Aသင့်တော်ဆုံး ဆီးဝမ်းထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ AသုံးAဆောင် ပစ္စည်းတွေကို Aသုံးပြုနေတာ
ဟုတ်၊မဟုတ်ကို သိနိုင်ေAာင် ဆီးဝမ်းထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ သူနာပြုAကြံပေးရဲ့ စစ်ဆေးချက်ကို ရယူဖို့ Aကြံပေးတိုက်တွန်းAပ်ပါတယ်။
ဆီးဝမ်းထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ AသုံးAဆောင်ပစ္စည်းတွေAတွက် Oစတြေးလျားနိုင်ငံAစိုးရက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောက်ပံ့ရေးAစီAစU် မျိုးစုံရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီAစီAစU်တွေကို ရယူAသုံးပြုနိုင်ဖို့ လိုAပ်ချက်ပြည့်မီမှု ပုံစံAမျိုးမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့ကြေး
ရရှိနိုင်ပုံ Aမျိုးမျိုးရှိပါတယ်၊ သ Aနေန့လဲ ည်း Aစိုးရရဲ့ Aမျိုးမျိုးသော AစီAစU်တွေAရ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ကြေးကို လျှောက်ယူ ရရှိနိုင်ဖို့ လိုAပ်ချက် ပြည့်မီနိုင်တယ် ဆိုတာကို သတိထားဖို့ Aရေးကြီးပါတယ်။ Oစတြေးလျားနိုင်ငံ Aစိုးရက
ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ပံ့ရေးAစီAစU်တွေဟာ ဘယ်ပြည်နယ်မှာဘဲ နေနေ၊ ရယူAသုံးပြုဖို့ လိုAပ်ချက်ပြည့်မီတဲ့Oစတြေးလျားနိုင်ငံသားAားလုံးAတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်နယ်/ဒေသA စိုးရက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့တဲ့
A စီA စU်A မျိုးမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ပိုပြီးသိလိုရင်
တစ်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ဆီးဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ
ကူညီရေးဖုန်းလိုင်း 1800 33 00 66 ကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဆက်သွယ်ပါ။ တကယ်လို့ သင့်မှာ A င်္ဂလိပ်စကား
ပြောဖို့ A ခက်A ခဲရှိနေရင် သင်ဟာ တယ်လီဖုန်းနဲ့
စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုကိုA သုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ 13 14 50 ကို ဆက်ပါ။ ရှေးဦးစွာ
တစ်ယောက်ယောက်က A င်္ဂလိပ်လို ပြောပါလိမ့်မယ်။
သင်က သင်ပြောတဲ့ဘာသာစကားA မည်ကို
ပြောလိုက်ပြီး ဖုန်းမချသေးဘဲခဏစောင့်ပါ။ သင့်ကို
သင့်ဘာသာစကားပြောတတ်တဲ့စကားပြန်နဲ့
ဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို သင်ဟာ
တစ်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ဆီးဝမ်း ထိန်းနိုင်မှုဆုင်ိရာ
ကူညီရေးဖုန်းလိုင်း ကို 1800 33 00 66 မှာ
ဆက်သွယ်လိုကြောင်း ပြောပြပါ။ A ဆက်A သွယ်ရဖို့
ဖုန်းကိုင်ပြီးစောင့်နေပါ၊ စကားပြန်က သင်
ဆီးဝမ်းထိန်းနိုင်မှုဆိုင်ရာ သူနာပြုA ကြံပေးနဲ့
စကားပြောဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ တယ်လီဖုန်းနဲ့
စကားပြန်ဝန်ဆောင်မှုဟာ A ခမြဲ့ဖစ်ပါတယ်။